Abavelisi beMveliso, abaThengisi | Imveliso yase China
Welded wocingo yenziwe umgangatho ophezulu carbon sentsimbi ucingo umqolo welding, uze kushushu nkxu kwalenza, PVC camera umphezulu zeplastiki camera unyango plasticizing.
Ukufikelela kumphezulu womnatha osicaba, ofanayo umnatha, ukusebenza ngomatshini wasekhaya kulungile, kuzinzile, ukumelana nemozulu elungileyo, ukuthintela umhlwa.
Isitayile esinamacingo esentsimbi:
* Hot nkxu kwalenza emva kokuluka.
* Kushushu nkxu kwalenza ngaphambi kokuluka.
* Electro iqaqanjiswa emva kokuluka.
* Electro iqaqanjiswa phambi kokuluka.
* Yenziwe ngentsimbi eshayinayo.
Izixhobo zenziwe ngentsimbi yentsimbi kunye nomgubo odibeneyo okwenza ukuba zinganyangeki kwaye zihlala ixesha elide.
Ucingo oluproliweyo ngaphezulu lokuhombisa, umbala weplastikhi eluhlaza wawutyabeka ngocingo olwenziweyo, olusetyenziselwa ukuhombisa igadi.
Isixhobo: Mae yocingo lwentsimbi ekumgangatho ophezulu.
Iqhubekekisa: Ukuluka kunye Welded
Izibonelelo zeMveliso Ukuchasana nokubola, ukumelana nobudala, ubungqina belanga, njl
Ucingo lwentsimi lwenziwe ngocingo olomeleleyo lwentsimbi. Yeyona fence ibalaseleyo yokukhusela ingca, amahlathi, uhola wendlela kunye nemeko-bume.
Ukukhula ngokubanzi kwesakhiwo sesikwere, ikakhulu esetyenziselwa umlambo, ithambeka lebhanki, Inokuthintela umjelo womlambo ekubeni ukhukuliswe ngumoya wamanje, umoya kunye namaza. ngolwakhiwo oluguquguqukayo kunye nokuqina okuqinisekileyo, okulungeleyo ukukhuthaza ukukhula ngokukhawuleza kwezityalo zendalo.
Square wocingo yenziwe ngocingo yentsimbi kwalenza okanye ucingo steel stainless, lisetyenziswa kumashishini kunye nolwakhiwo yokugalela umgubo wokudla okuziinkozo, ulwelo lokucoca ulwelo kunye negesi ezinye iinjongo ezifana oonogada ekhuselekileyo koovimba koomatshini.
Iintlobo wocingo Square:
Ezinamacala wocingo isetyenziselwa ukondla inkukhu, amadada, irhanisi, imivundla kunye ucingo zoo, njalo njalo.
Inokuyilwa kwibhokisi ye-gabion-enye yeemveliso zecingo ezaziwa kakhulu kulawulo lwezikhukula. Emva koko kufakwa amatye kuyo. Ukubekwa kwegabion kwenza udonga okanye udonga ngokuchasene namanzi kunye nezikhukula. Stainless ezinamacala wocingo nayo welding kwi iinkuku iminatha zokufuya inkukhu kunye nezinye iinkukhu.
Amasango enziwe ngezinto ezisemgangathweni ophezulu kunye neenkqubo zokuwelda. Welded phambi ukutyabeka ukukhusela eliphezulu nxamnye nemozulu kunye nokumelana efanayo iiphaneli ucingo. Amasango ethu afaka izinto ezikumgangatho ophezulu kunye nezomeleleyo kunye neenketho ezahlukeneyo zokutshixa ukuhambelana nezicelo ezahlukeneyo.
Iindidi zeSango leGadi:
* Isango elinye lephiko.
* Isango lamaphiko amabini
Ububanzi obuqhelekileyo be-Nail: 1.2mm-6.0mm Ubude: 25mm (1 intshi) -152 mm (ii-intshi ezi-6) Izinto: Q195Unyango lomphezulu: Ipholishiwe, iZinc ifakiwe / i-Zinc emnyama ifakelwe ukupakisha iinkcukacha: 1.Ngobuninzi 2. Ukupakisha kwempahla 3 Ukuthumela ngenqanawe: iibhokisi ezingama-25 kg / CTN, njl. 4. Ngokwesicelo sabathengi. Ikhonkrithi yekhonkrithi yekhonkrithi: 1.2mm-5.0mm Ubude: 12mm (1/2 intshi) - 250mm (10inches) Izinto: # 45Unyango umphezulu wensimbi: iZinc, iBlack Zinc Plated / Black Zinc Plated Ukupakisha iinkcukacha: 1 ....
Ngumthwali onyukayo kwizityalo zomthi womdiliya kunye namayeza anyukayo. Isetyenziswa ngokubanzi kwizindlu zokugcina izityalo, ukutyalwa komhlaba, izityalo zangaphakathi ezenziwe ngebhotile, iintyatyambo zegadi kunye nokuhombisa umhlaba ngenxa yokusetyenziswa kwayo ngokuguquguqukayo kunye nokuhluka, ukuzinza, ukugoba ngobume kunye nokugoba ngotyekelo.
Iposi yocingo: Izithuba zocingo zisetyenziswa kuluhlu olubanzi lweeprojekthi zangaphandle ukusuka kwiidesika ukuya kwiingcingo.
Uhlobo lweposi: Iposti ye-Euro, iT post, Y iposti, U post，Ukukhethwa kweenkwenkwezi.
Iposi yePayipi yeYuro ngu yenza ityhubhu setyhula, kwalenza kunye nomgubo wawutyabeka RAL6005 eluhlaza.
Ngocingo oluhlabayo luhlobo lodwa kunye nokhuseleko lomnatha olwenziwa ziindlela ezahlukeneyo zokuluka ngokubhijela ucingo oluhlabayo kucingo oluphambili (imicu) kusetyenziswa umatshini wocingo oluhlabayo.
Indlela yonyango yomphezulu yenziwa ngesinyithi kwaye iplastikhi yePVC yagutyungelwa.
Zintathu iindidi zocingo oluhlabayo:
* Ucingo olunye olujijekileyo oluhlabayo
* Ucingo olujijekileyo oluphindiweyo
* Ucingo olujijekileyo oluhlabayo